Archive du 20180821
Serge Jovial Imbeh “Zaraina ara-drariny ny harena misy eto”
Firenena anisan`ny mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara kanefa toa be mpitsiriritra satria misy harena adala tompo sy kitapo latsaka eto. Rehefa tsy avelan’ny mpitondra hitrandraka sy hisitraka izany ny vahoaka malagasy dia tonga ny vahiny hitavana azy.
Monja Roindefo sy Patrick Raharimanana Nitsoaka an-daharana sahady
Tsy ho kandida, tsy handray anjara, tsy hanohana kandida ny antoko Monima, hoy ny fanambaran’ny filohany Monja Roindefo, raha efa nanambara izy vao tsy ela akory izay izy fa hirotsaka.
Fifaninanana ho eny Iavoloha Hihoatra ny 30 isa ireo kandida
Hifarana anio talata 21 aogositra ny fe-potoana farany hahafahan`ireo kandidà hametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana. Hanao ranolava ny fanaterana dosie eny amin`ny HCC satria toa fomba mahazatra fanao eto amintsika rahateo ny miandry fotoana farany.
Faneva Raholdina Kandidan’ny Fanarenam-pirenena i DADA
Hisaorana an’Andriamanitra ny nirotsahan’i Dada Marc Ravalomanana ho anisan’ireo kandidà ho filoham-pirenena amin’ny fifidianana amin’ny 7 novambra izao,
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Hofidiana ireo tetikasa 5 mendrika mandritra ny Salon RSE
Hotanterahina ny 31 aogositra ka hatramin’ny 01 septambra ho avy izao etsy amin’ny Hotel Carlton Anosy ilay salon RSE et initiative pour le developpement durable karakarain’ny kabine Ur CSR Consulting.
Nantenaina mpihira Hizara kôpia ho an’ny ankizy ao Toamasina
Ny kopia mari-pahaterahana no fototra maha olona ny olona iray, hoy i Nantenaina mpihira.
Soavinandriana – Itasy Nahazo fotodrafitrasa 2 goavana
Nahazo toeram-pandidiana raitra sy moderna ny hopitalin’ny distrika any Soavinandriana (CHRD2). Nahazo fotodrafitrasa vaovao mahazaka mpianatra miisa 350 ihany koa ny lisea teknika. Ireo fotodrafitrasa roa sosona ireo no notokanan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany an-toerana omaly.
Kaominina Andina Nohavaozina ny hopitalim-panjakana
Tamin’ny Repoblika voalohany no niorina ny hopitalim-panjakana tao amin’ny kaominina Andina ao amin`ny distrikan`i Ambositra, faritanin`i Fianarantsoa.
Fidangan’ny vidin-tsolika Ny tsy fahampian’ny fifaninanana no antony
Tsy misy fifaninanana eo amin’ireo mpamatsy solika ka izany no mahatonga ny vidiny ho lafo hatrany.
Zoma Center Analakely Ahitana fanaka mety ho an’ny daholobe
Amin’ izao fotoana izao vanim-potoan’ny fialan-tsasatra izao dia maro ny trano fivarotana manavao ny tolotra omeny ny daholobe.